China Nonconventional / Yakakosha Zvishandiso fekitori uye vagadziri | Jitai
Aluminium Alloy Mapakeji
Izvo zvakanakira aruminiyamu chiwanikwa ndeyehuremu hwayo huremu, simba rakasimba, uye iko nyore kwainogona kuumbwa. Saka nekudaro inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira kwemagetsi kurongedza.
Yakakwira yekupisa conductivity
• Kuderera kwakaderera
Kugona kwakanaka uye kushanda, waya kucheka, kukuya uye pamusoro pegoridhe rairo kunogona kuitwa.
MUENZANISO KUSVIKIRA KWEZVINHU ZVAKAITIKA / × 10-6 / K KUITIKA KWEMAHARA / W · (m · K)-1 KUVIMBIKA KWA / g · cm-3
Aluminium Silicon Simbi Mapakeji
Si / Al alloys emagetsi mapakeji anonyanya kureva eutectic alloy zvinhu zvine silicon zvemukati me11% kusvika 70%. Kuwanda kwayo kwakaderera, iko kuganisana kwekuwedzera kwekushisa kunogona kuenzaniswa kune chip uye substrate, uye kugona kwayo kubvisa kupisa kwakanyanya. Kugadzirwa kwayo kwemuchina zvakare kwakakodzera. Nekuda kweizvozvo, maAl / alloys ane mukana wakakura muindasitiri yekupakata yemagetsi.
• Kutsanya kupisa kupisa uye kwakanyanya kupisa kupisa kunogona kugadzirisa matambudziko ekupisa ekupisa anowanikwa mukuvandudzwa kwemagetsi emagetsi.
• Iyo coefficient yekupisa kwekuwedzera inodzora, izvo zvinoita kuti zvikwanise kuenzanisa neiyo yechip, kudzivirira zvakanyanya kupisa kwekushushikana kunogona kukonzeresa kukundikana kwechigadzirwa.
CE Chiwanikwa zita Chiwanikwa chiwanikwa CTE, ppm / ℃ ， 25-100 ℃ Kuwandisa, g / cm3 Thermal Kuitisa pa25 ℃ W / mK Bend Simba, MPa Zivisa Simba, MPa Kwakavharwa nenyama Modulus, GPa
Dhaimani / Mhangura, Dhaimondi / Aluminium
Dhaimani / Mhangura uye Dhaimondi / Aluminium zvinhu zvinoumbwa nedhaimani sechikamu chekusimbisa uye mhangura kana aruminiyamu sechinhu chematrice Izvi zvinokwikwidza uye kuvimbisa zvemagetsi zvigadzirwa. Kune ese ari maviri madhaimani / mhangura nedhaimani / aluminium simbi dzimba, iyo yekudziya conductivity yenzvimbo chip iri ≥500W / (m • K) -1, inogutsa mashandiro ekuita kweakanyanya kupisa dissipation yedunhu. Nekuenderera mberi kwekuwedzera kwekutsvagisa, aya marudzi edzimba achaita basa rinowedzera kukosha mumunda wekurongedza zvemagetsi.
• Yakakwira kudziya inoitisa
• Iko kuganisana kwekuwedzera kwekushisa (CTE) kunogona kudzorwa nekushandura chikamu chakakura chedhaimani neCu zvinhu
Kurongeka kwakanaka uye kushanda, waya kucheka, kukuya uye pamusoro pegoridhe rairo kunogona kuitwa
MUENZANISO KUSANGANISWA KWEZVINHU ZVAKAITIKA / × 10-4 / K. KUITIKA KWEMAFUNGWA / W · (m · K) -1 KUVIMBIKA KWA / g · cm-3
Aluminium nitride zvedongo ndeyehunyanzvi zvedongo zvinhu. Iyo ine yakanakisa yekupisa, yemagetsi uye yemagetsi zvivakwa, senge yakakwira magetsi conduction, diki hama dielectric nguva dzose, mutsetse wekuwedzera coefficient inoenderana nesilicon, yakanakisa yemagetsi kuputira, uye yakaderera density. Iyo haina-chepfu uye yakasimba. Nekuvandudzwa kwakakura kwema microelectronic zvishandiso, aluminium nitride ceramics sechinhu chepasi kana cheimba yepakeji, yave kuwedzera kufarirwa. Iyo inovimbisa yepamusoro-simba rakabatanidzwa redunhu substrate uye yekupakisha zvinhu.
• Yakakwira kudziya inoitisa (ingangoita 270W / m • K), padyo neBeO neSiC, uye kanopfuura ka5 iyo yeAl2O3
• Iyo yekupisa yekuwedzera mwero inowirirana Si uye GaAs
• Yakanaka magetsi zvivakwa (zvidiki dhiipi remagetsi nguva dzose, dielectric kurasikirwa, vhoriyamu resistivity, dielectric simba)
• Yakakwira michini simba uye yakanaka machining kuita
• Yakanaka michina yemaziso uye microwave
• Isina chepfu
Pashure: TO Mapakeji
Zvadaro: HIC Mapakeji